Booqasho rajo xumo laga dhaxlay | Maqaallo | somaanta
Booqasho laga dhaxlay rajo-xumo iyo Islaam ka carar
Booqashada dheer ee Madaxweynaha Dowladda Federaalka KMG ah ee Midnimada Qaran ee Soomaliya (DFKMQ-S), Sheikh Sharif Sh Axmed iyo Lammaanihiisa Sharif Xasan Sheikh Aadan ku yimaadeen dalka Mareykanka waxaa laga dhaxlay rajo-xumo iyo Islaam ka carar. Sababaha waxaa ka mid ah:
 Madaxweynaha oo uu muuqday Jilaa dadka maaweelinaya, khudbadihiisuna ay ka marneyd calaamad hogaamiyannimo (Leadership) oo xambaarsan aragti fog (vision) ee salka ku haysa waayo aragnimo marxaladihii la soo maray, qiimeyn dhab ah ee xaaladda la marayo iyo mustaqbalka la higsanayo. Madaxweynuhu si sax ah ugama tarjumin xaqiiqada taarikhda gaaban ee uu doorka ku lahaa.
 Madaxweynaha ma sheegin dhaqaalaha soo gaaray Dowladdiisa iyo wax qabad ay ku tallaabsatay 8dii bilood ee la soo dhaafay marka laga reebo in Ciidammada AMISOM oo Dekedda, Garoonka Diyaaradaha iyo Madaxtooyada gacanta ku haya ka badbaadiyeen Afgambi (Inqilaab) Mucaaradka. Isticmaalka Ereyka Afgambi waa slogan uu Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay u qaabilsan Soomaliya, Axmedou Ould Cabdalla, adeegsado si Beesha Caalamka loogu qasbo difaaca Dowlad magac-u-yaal ah oo aan laheyn Shuruudaha Caalamiga ah ee Dowladnimo.
 Madaxweynaha oo ka xoogay Madaxweyne Cabdullahi Yusuf iyo Ra’iisul Wasare Cali M Ghedi looxii iyo hal ku dhegyadii siyaasadda cinwaankeedu ahaa la-dagaalanka-argagixisada si beesha Caalamka ula soo gurmato ciidan, dhaqaale iyo taagero siyaasadeed. Dowladaha Reer Galbeedka ah waxay go’aansadeen inay ka guuraan siyaasadda la-dagaalanka-Argagixisada oo macnaheedu noqday Islaam naceyb, Muslimiintana ay ka dhiidhiyeen.
 Madaxweynaha oo ku celceliyay in Dowladdiisu xoog uga qabsan doonto Mucaaradka dhulka ay ka taliyaan, ayadoo 8kii bilood Dowladdu jirtay aysan xukunkeeda ku fidin 1 Km. Madaxweynaha kama hadlin Barakaca iyo Burburka ay dowladdiisu dhinac ka tahay. Durbaanka la-dagaalanka-argagixisada waa qodob Dowladdu ku dooneyso dhaqaale aan laheyn xisaab celin muddada labada sano. Madaxtooyada, Ra’isul Wasaaraha, Maaliyadda iyo Taliska Nabadsugidda ayaa u xilsaaran Maamulka dhaqaalaha la-dagaalka-argagixisada. 8da Oktoobar 2009, Golaha Wasiirrada wuxuu ka dooday in Wasaaradda Maaliyadda ku takrifashay dhakhliga Qaranka, laguna sameeyo dabagal.
 Madaxweynaha oo u hadlay inuu muuqaal ama magac ahaan Madax u ahaa, kana tirsanaa Midowga Maxaakimta Islaamka iyo Isbaheysiga Dib u Xoreynta Soomaliya, hase yeeshe fikir ahaan iyo ruux ahaan ka tirsanaa safka Cabdullaahi Yusuf, Sharif Xasan, Aadan Madoobe iyo Cali Maxamed Ghedi.
Xubnaha Jaaliyadaha Soomalida-Mareykanka ah ee deggan Gobollada Minnesota, Ohio, Washington, D.C iyo Virginia oo ka qayb galay xafladaha soo dhoweynta Madaxweynaha waxay muujiyeen jeceylkooda iyo rajadooda ku aadan nabad iyo nidaam dowli ah ka hirgala Soomaliya, waxayna ku booriyeen Madaxweynaha inuu mudnaanta siiyo Dib-U-Heshiisinta. Jaaliyadaha lama siin fursad ay fagaaraha su’aalo ku weydiiyaan Madaxweynaha iyo Lammaanihiisa.
Booqashadu waxay ku soo beegantay waqti ay soo baxayaan qaylo dhaan badan sida:
1. In 10 ka mid ah Ciidammada Mucaaradka Islaamiyiinta ah (Argagixisada) ay ka adag yihiin 100 Ciidammada Dowladda iyo in Dowladda Federaalka aysan ka adkaan karin Xoogagga Mucaaradka.
2. Wasiirka Arrimaha Dibedda Ethiopia oo ka sheegay Golaha Guud ee Qarammada Midoobay in dagaalka Soomaliya uusan aheyn mid u dhexeya Soomalida keli ah ee uu yahay dagaal ay Ethiopia dhinac ka tahay. Wuxuu Beesha Caalamka, gaar ahaan Golaha Ammaanka, ka dalbaday in si deg deg ah hurdada looga kaco inta Islaamiyiinta aysan la wareegin Soomaliya. Madaxweyne Sheikh Sharif wuxuu ku raacay Wasiirka Ethiopia digniintaas.
3. In Madaxda Ururka Al Shabab rabaan inay ka fuliyaan falal argagixiso gudaha dalka Mareykanka.
4. In magaca Dowladda Federaalka ciidan looga qorayo Somalida u dhalatay dalka Kenya.
Dadka u guur gala arrimaha Soomaliya waxay qabaan in booqashada Madaxweynaha loogu tala galay dhinac kicinta, dhiilo gelinta Beesha Caalamka iyo dhinaca kale naf ku haynta (life support) Dowladda, kaddib markii ay soo baxeen ifafaalo muujinaya in Dowladda Federaalka qarka u saaran tahay burbur.
Qodobbada tanaaqudka iyo dhiillada ka muuqato ee khudbadaha Madaxweynaha waxaa ka mid ah:
 In Mudnaanta Dowladda tahay dhismaha ciidan lagula dagaalamo Islaamiyiinta Mucaaradka ah (Argagixisada) oo diiday inay soo raaacan dowladda. Sida ku cad Axdiga 2004, Dowlad Dib-U-Heshiisineed KMG ah ma ahan inay dagaal gasho. DFKMQ-S ma lahan Dastuur lagula xisaabtamo. Waa Awood ay shirko ku yihiin Wakiilka Xoghayaha Qarammada Midoobay Axmedou Ould Cabdalla iyo labada Sharif. Cumar Cabdirashid iyo Adan Madoobe waa xubno dhimman (Associates). Dagaal ololeynta waxay muujinaysa in Dib-U-Heshiisintii Jabuuti aheyd dhalanteed. Waxaa isweydiin leh xaggee ka baxeen 17,000 ciidan ee Ethiopia soo tababartay, 5,000 oo ka tirsanaa Maxaakimta Islaamka ee ku biiray Dowladda iyo ciidammadii la tababaray 8kii bilood ee la soo dhaafay oo Dowladda Mareykanka siisay hubka 40 ton ah?
 In Beesha Caalamka gurmad ciidan iyo dhaqaale dheeraad ah la soo gaarto Dowladda Federaalka si looga guuleysato Islaamiyiinta (Argagixisada) wata afkaar ajnabi ah, ka hela taagero dhaqaale iyo ciidan Ururka Al Qaeda iyo dalal ajnabi ah. Tiro 800 ilaa 1100 dagaalyahanno Ajnabi ah ayaa la safan Mucaaradka. Taas macnaheedu wuxuu yahay in DFKMQ-S iyo Islaamiyiinta (argagixisada) labaduba rabaan inay dalka ku qabsadaan ciidan, dhaqaale iyo afkaar ajnabi ah, ayadoo aysan dhicin dib u heshiisin shacabka dhexdiisa ah. Waxaa suura gal ah in Madaxweynuhuu ogaa joogitaanka tiro ka mid ah dagaalyahannada Ajnabiga ah markii uu inkiri jiray.
 Inuusan Madaxweyne ahaan arag Dowlad iyo Madax Ajnabi ah oo rabta inay u doodo Maslaxadda Soomaliya.
 In Beesha Caalamka aysan dhiirrigelin Dib-U-Heshiisin cusub oo caalami ah, xiriir iyo wada hadallo toos ahna la yeelan Mucaaradka. Wareysi uu siiyay Wargeyska New York Times, Madaxweynuhu wuxuu ku sheegay in Beesha Caalamka aysan taagerin si toos ah Ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo la dagaalamaya Al Shabab iyo Xisbul Islaam, hadalkaaso ka soo horjeeda heshiiskii dhexmaray Dowladda iyo Ururka oo Golaha Ammaanka ee QM taageray.
 In Wasiirka Maaliyadda Sharif Xasan iyo Asaga dhexmaray ballan adag, Wasiirkuna yahay mas’uul daacad ah. Ballanka dhexmaray labada Sharif wuxuu mudnaan ka leeyahay Maslaxadda dalka. Dad badan waxay isweydiinayaan sababta saacad kasta Wasiirka Maaliyadda ula joogo ama ula socdo Madaxweynaha, dhaqankaasoo lid ku ah mas’uuliyadda iyo habmaamuska Madaxweynaha iyo nidaamka Dowliga ah.
 In Masaajidyada lagu dooriyo Maskaxda dhallinyarada, Waalidiintuna ka fiirsadaan inay caruurtooda ku aaminaan Culumada Masaajidda. Madaxweynuhu ma xusin saameynta siyaasadaha Midowga Maxaakimta Islaamka iyo Isbaheysiga Dib u Xoreynta Soomaliya ku lahaan kareen Dhallinyarada ka tagtay Mareykanka oo ka qayb gashay la dagaalanka Ciidammada Ethiopia.
 In Heshiiskii dhexmaray Soomaliya iyo Kenya kuna saabsanaa xuduud badeedka labada dal yahay sax, go’aankii Barlamaanka ku diiday heshiiskaasna yahay wax kama jiraan. Gefka ugu weyn ee DFKMQ-S wuxuu yahay iska indhatirka inaysan aheyn Dowlad Rasmi Ah oo geli karta heshiisyo caalami ah oo ka baxsan shaqada loo xilsaaray. Waxaa kaloo muuqata in Madaxweynaha si xun loogu sharraxay dulucda Heshiiska oo ah aqoonsiga inuu jiro Muran xuduud Badeed (Maritime dispute) u dhexeya Soomaliya iyo Kenya, taaso macnaheedu yahay ha naloo garqaado. Mas’uul kasta oo ku shaqeynaya xilkasnimo wuxuu garanaya in gar dhexmarta Dowladda Kenya iyo Soomaliya oo aan laheyn Dowlad rasmi ah (Effective), guusha raaceyso Dowladda Kenya.
 Inuusan khilaaf ka dhex jirin Dowladda Federaalka, hadalkaaso ka fog runta. Ma qarsoona kooxaha la kala yahay. Bilo ka hor Wasiirro ayaa laga qaaday xilal muhiim ah. Xildhibanno ayaa Barlaamanka laga eryay. Khilaaf xoog leh ayaa ka taagan heshiiskii Ra’iisul Wasaaraha la gaaray Maamulka Puntland iyo kii dhexmaray Dowladaha Jabuuti iyo Soomaliya. Muran xoog leh ayaa ka taagan ku takrifalka dhaqaalaha soo gala Dowladda iyo xilka Guddoomiyaha Barlamaanka oo waqtiga xilkiisu dhammaaday.
 In dowladda Eritrea ka soo horjeedo nabadda Soomaliya, Dowladda Ethiopiana ay saaxib la tahay Soomaliya. Madaxweynaha marna ma soo hadal qaadin gumaadka iyo dhaca Ciidammada Ethiopia u geysteen Shacabka Soomaliya 2006-2009, faragelinta joogtada ah ee socota iyo abaalmarinta muwaadiniintii ka qayb galay dagaalka lidka ku ah gumeysiga tooska ah ama dadban ee Ethiopia. Madaxweynuhuu wuxuu si caro iyo canaan ku dheehan tahay ugu jawaabay gabadh soo hadal qaaday arrimahaas, wuxuuna ku yiri: Waa arrin laab la kac ah in Ethiopia la cambaareeyo ama wax laga sheego.
Waxay u muuqata in aragtiyada iyo xeeladaha loo adeegsanayo xallinta Mushkiladaha taagan iyo kasbashada awood siyaasadeed, masruuf iyo maal laga dhaxlayo dad la’aan, dal la’aan iyo wax la’aan. Mas’uuliyadda badbaadada Soomaliya waxay saaran tahay Soomali keli ah, xalkana wuxuu ku xiran yahay heshiis ka yimaada Gudaha Soomaliya.